Portal:Aasiya - Gpedia, Your Encyclopedia
Hooyga Gpedia: Dhaqanka
Warbixin Guud Juquraafiga
Aasiya (Eeshiya Af Ingiriis : Asia; Af carabi: آسيا; |ˈ|eɪ|ʒ|ə|,_|ˈ|eɪ|ʃ|ə|) waa qaarada ugu weyn Dhulka iyo tan ugu dadka badan leh, taasi oo dhacda meel u dhaxaysa dhamaan qaaradaha kale ee dhulka. Qaarada Aasiya waxay ku fadhidaa dhul baaxadiisu le'eg tahay 44,579,000 square kilometres (17,212,000 sq mi), taasi oo u dhiganta ilaa 30% dhulka Dunidan iyo 8.7% oogada sare ee meerahan. Intaas waxaa dheer, qaaradan waxaa ku dhaqan shacabka ugu badan ee aduunka taasi oo gaadhsan 4.4 bilyan (labada wadan ee ugu dadka badan waa Hindiya iyo Shiinaha). Waxaa xusid mudan iyadna in qaarada Aasiya ay ka dhismeen boqortooyooyinka ugu horeeyay ee aadamuhu sameeyaan. Guud ahaan, qaarada Aasiya waxaa dhinaca bari ka xiga Badweynta Baasifik, koonfurta waxaa ka xigta Badweynta Hindiya, dhinaca waqooyi waxaa ka xiga Badweynta Arktik. Aasiya waxay dhinaca ku haysaa qaarada Yurub, halkaasi oonu jirin wax dabiici ah oo labada qaaradood kala sooca. Laakiin sida ku xusan sharciyada caalamiga ee xuduudaha qaarada Aasiya xadkeedu wuxuu ka bilaabmaa bariga Gacanka Suweys, webiga Yural, iyo Buuraha Yural. Aasiya waa qaarada ugu weyn aduunka isla markaana ugu dadka badan dhamaan caalamka. Buurooyinka ugu weyn aduunka waxee ku yaalaan qaaradan.
Xuquuqda sawirka: Dean S. Pemberton
Muuqaalka Barta Nabada Hiroshima, oo ah meeshii Ogosto 6, 1945 Ciidamaha Maraykanku ku dhufteen Nukliyeerkii ugu horeeyay ee dunida ku dhaca.
Xuquuqda sawirka: Paul Rudd
Nin aaminsan diinta Sikhiga kuwaasi oo ku badan gobolka Bunjaab, Hindiya.
Portal:Aasiya/Shakhsi xul ah/3
Malaysiya waa wadan ku yaalo koonfurta bari ee qaarada Aasiya.wadankaan wuxuu xuduud la leeyahay wadamada Filibiin, Tayland,Barunay,Singabuur iyo Indunisiya. Caasimada wadanka waa Kuala Lumbur.Wadanka malaysiya waxaa degan dad gaaraayo ilaa 28,250,000 oo qof,waxa uuna u dhisanyahay dhinaca federaalka.Malaysiya waxaa degan ajaanib kala duwan, waxaa u badan malaysiyaanka ama malaya oo 50% ah inta kale waa ajaanib iskuugu jirto hindi, shiinees iyo kuwo kale.Wadanka malaysiya markiisa hore wuxuu lahaan jiray magacyo badan, mar waxaa la dhihi jiray (wadanka jasiirada Malaysiya) hadaneh waxaa loo bedelay (malaya) 1946dii marka oo wadanka midoobay waxaa loo bixiyay (midowga malayaasha), kadib neh waxaa loo bedelay (federaalka malaya), 1957ii marka ee xornimada qaateen waxee la midoobay gobolo ka mid ah wadanka Singabuur, isla markaas neh waxaa loo bixiyay (malaysiya), Singabuur waxee malaysiya ka go'day waqti labo sano kayar. Isla markaas neh Wadanka Malaysiya wuxuu ku dadaalay dhaqaalihiisa. wadanka malaysiya waxee 50ka sano ugu horeeysay ka mid noqotay wadamada ugu dhaqaalaha fiican.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Portal:Aasiya&oldid=173034"